Iyo fomati fomati iyo Kdenlive uye OpenShot inoshanda pamwe ne | Linux Vakapindwa muropa
MuAchinyorwa chapfuurar Ndakavimbisa kutanga nekuenzanisa pakati OpenShot y Kdenlive, maviri evanonyanya kuvhurwa sosi isina-mitsara edhita. Asi, Ndakawana kudiwa kwekujekesa dzimwe pfungwa kuitira kuti ndisazviita mumaposvo pachavo nenjodzi yekutsauka kubva kumusoro.
Kana iwe ukatarisa pamhando dzemapurojekiti ayo Kdenlive neOpenShot anokupa iwe, iwe unowana iwo akateedzana etsamba uye manhamba. OpenShot inoita kuti zvinhu zvive nyore kwauri nekuzvimisikidza nemadhizaini ekushandisa. Nekudaro, isu tichiri kuda kutsanangura mamwe mazwi
1 Duramazwi remafomati epurojekiti
1.3 HD uye Yakazara HD
Duramazwi remafomati epurojekiti
FPS: Ndiwo mazita echiRungu echiratidziro cheFremu Pasekondi (Ivo vanoshandirawo vhezheni yeSpanish) Kana isu tichiona vhidhiyo, iyokana izvo zvatinoona ichiri mifananidzo inoratidzwa mukuteedzana kupa pfungwa yekufamba. Nekuti uropi hwemunhu hunogona kungogadzirisa akanakira gumi nemaviri mafuremu pasekondi, chero ipi yekumhanyisa mhanyisa inodarika chiratidzo ichi inoonekwa semufananidzo unofamba.
Saka mukufunga Iwo mafuremu mazhinji pasekondi vhidhiyo inosanganisira, iyo inotsvedza muoni anozoiona. Mukudzoka, vhidhiyo inotora imwe nzvimbo
Yakatsvairwa: Yechinyakare cinematic fungidziro inoratidza mafuremu akazara imwe mushure meimwe mukukurumidza kuteedzana. Zvisinei, maitiro maviri akasiyana anoshandiswa pavhidhiyo.
Kupatsanurwa kutsva kunopatsanura furemu rimwe nerimwe kuita mafuremu maviri akasiyana. Imwe iine mitsara yakaenzana uye imwe yacho iine zvisinganzwisisike. Mune mamwe mazwi, iine 1920 x 1080 pixel yekutarisa iyo yekutanga furemu yaizove nemakumi mashanu nemakumi mashanu emitsara yemakumi mapikisheni e540 uye imwe yacho yakafanana nhamba isinganzwisisike. Kutanga iyo iine mitsara yakaenzana munguva isingasvike 1/60 yechipiri inoratidzwa uyezve yechipiri iyo nguva yakafanana wozoenda kune inotevera furemu.
Sezvakaita cinematography, sezvo ziso risingakwanise kuona shanduko dzinokurumidza kudaro, rinozvinyora semufananidzo wakazara.
Mukuferefeta kunoenderera mberi, mufananidzo unovakwa uchiratidza neimwe nzira mapikisi emitsetse yeimwe furemu kubva kune yekutanga kusvika kwekupedzisira, zvese nekumhanya uko ziso remunhu risingakwanise kugadzirisa.
Mumadhijitari ekuratidzira zvishandiso (verenga monera skrini, materevhizheni, mafoni emafoni uye nezvimwe zvakadaro) Hunhu hwemifananidzo hunoyerwa nekugadziriswa kwayo. Kugadziriswa kunoverengerwa nenhamba yematanho emira uye yakatwasuka epikisi iyo skrini inogona kuratidza.
Pakati pemafomu eprojekti atinogona kusarudza ndeaya:
Pane akasiyana maviri zvichienderana nekuti terevhizheni kana cinema skrini
Mune ino kesi tiri kutaura nezvekugadziriswa kwemazana matatu nemakumi masere nemakumi mana nemazana mana nemakumi mapfumbamwe emakumi mapikisheni
Kugadziriswa kuri 3840 x 2160 pixels
Iyi fomati ine kanokwana kana kutsanangurwa kweyakajairwa 720p HD, zvinoreva kuti iyo imwecheteyo mapikisheni mana mana ekuratidzira anogona kukwana pane QHD kuratidzwa kweiyo saizi, kureva 2.560 x 1.440 pixels, kana 1440p.
HD uye Yakazara HD
Kana tichitaura nezve HD tiri kureva zvisarudzo zvekutanga zvetsananguro yepamusoro yeTV, kunyanya iya yemazana maviri mazana maviri nemakumi masere pixels yakafara nemazana manomwe epikisheni kumusoro.
Izvo zvinonzi 'Yakazara HD' zvinoreva chisarudzo chinoyera mapikisheni 1.920 x 1.080, anonziwo 1080p. Ichi chisarudzo resolution chakajairika pane akangwara maTV uye mazhinji emazuva ano mafoni, maPC, malaptop, uye monitors. Ose maviri marudzi ezvisarudzo anoshandisa 16: 9 factor ratio (saka kune gumi nematanhatu mapikisheni akatwasuka eese mapfumbamwe mapikisheni akamira).
Iwo maviri evhidhiyo edhita anopawo akasiyana marudzi eesarudzo resolution ayo ari madiki muhukuru kana ane chiyero chechikamu chakaringana kune akatwasuka masikirini.
CIF: 355 x 288 ine 4: 3 chimiro cheyero.
QVGA: 320 x24 zvakare ine 4: 3 factor ratio
VGA NTSC: 640 X 480 uye zvakare 4: 3 factor ratio
Vertical HD 1080 X 1920 iri chikamu che9
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iyo fomati fomati iyo Kdenlive uye OpenShot inoshanda nayo